Jordi Alba Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Jordi Alba Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Moto GP". Yedu Jordi Alba Childhood Nyaya pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake kusvikira iye zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva kuti ari kurwisa nokukurumidza kusara nemakumbo uye simba. Zvisinei, maoko chete mashoma mafiki anoziva zvakawanda nezvaJood Alba's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Jordi Alba Ramos akaberekwa musi we 21st waMarch 1989 ku L'Hospitalet, Spain. Akaberekerwa muchizvarwa cheCatalan kuna amai vake, Maria Jose uye baba, Alba Miguel.
Kuberekwa uye kuberekerwa mumuganhu wechipiri mukuru kuBarcelona kwaireva mukana wakakura wekutora bhora sechido chokudaidzira kune guta rinozivikanwa kupfuura yebhola kupfuura chero chimwe chinhu. Jordi muduku akakurira mutambo nemukoma wake David Alba munharaunda yeAlpatitalet yeBarcelona.
Achikura, akawana dzidzo yake yepakutanga kuBarcelona school yeSpain iyo yakamupa mukana we achida kutamba nhangemutange yenhabvu munguva yemitambo nguva. Pazera remakore 7 mugore ra 1996, mhuri yaJordi Alba yakasarudza kuita kuti mwanakomana wavo atore mutambo semutambo. Mugore rimwe chete, Jordi Alba muduku akatanga rwendo rwake rwomutambo neCatalonia native club club Hospital Hospital. Akaonekwa somuduku, mukuru uye mukuru weboka rake sezvaakaona pasi apa.
Kuva netsika yakakurumbira yekurega vatambi vavo vakanakisisa kuenda kuLe Masia (FC Barcelona Youth football club), Hospitalense haikwanise kuregedza nyanzvi yavo nyanzvi kuti iite mumiedzo. Jordi Alba akaenda ku Lemasia football academy nechivimbo chakakwana. Pasinei nokuti aiva muduku zvikuru izvo zvaive zvisingakwanisi, Jordi akaratidza kufambisa kunetsa izvo zvakaedza mutungamiri wevechidiki kuti amugamuchire ane tarisiro yokuti aizokura murefu mumakore anotevera.
Alba chaizvoizvo basa rake mumazana eveBarcelona sevhisi yeruboshwe. Akanakidzwa nenguva yekare pachikwata. Rimwe remangwanani rake risingakanganwiki rinosanganisira iye kudya kwekudya neyemutambo we FC Barcelona, Louis Van Gaal. Sekuratidzwa mumufananidzo uri pasi apa, vose vakagara patafura vachitaura nezvenzvimbo yakanakisa yekutamba Jordi mubhola.
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutarisana Nekutambura uye Kukwidzwa Mukurumbira
Kuva nehuwandu hwekuvandudza uye kuwirirana ne Louis Van Gaal haisi kuvimbiswa kunakidzwa muBascal's Le Masia academy. Jordi Alba aiva nechinetso chimwe chikuru. Ichokwadi chokuti iye aive "Zviduku". Apo varwi vake vechechi vakakura zvakakura nemakore avo, Jordi murombo akashungurudzika. Izvi zvakakonzera kukakavadzana kukuru pakati peBraça Infantil B mutungamiri iwe iwe Lionel Messi akanga akanganwirwa. Muna 2005, Barcelona yakabudisa Jordi Alba pakuonekwa "Zviduku uye yakaonda". Vakanga vasina kuziva kuti aizouya muFIFA yenyika cup 5 makore gare gare. Zvakakosha kuziva kuti Jamie Vardy vakatambura zvakafanana nevechidiki wechidiki.
Kuvonga nekukurudzirwa kubva kuvabereki vake uye mukuru mukuru, Jordi muduku akaenderera mberi. Akagamuchirwa neshamwari yake yekambani Cornellà. Jordi Alba akakurudzira kubva pamarwadzo ake ndokuwana nyaradzo nevadzidzi vake. Kugara kazhinji kwekuwedzera kwekuwedzera kwakabatanidzwa nechisimba cheku--kudzika zvakakurisa zviratidzo. Kukura pakupedzisira kwakauya kunoenderana nenguva Jordi yakawana zita rake "MotoGP"
Pashure pemakore maviri ayo akamuona achikura kure, FC Valencia akasarudza kubhadharisa kune kuruboshwe shure kwemari ye € 6,000. Yaiva paValencia Jordi Alba pakupedzisira akapedzisa hutano hwake mushure mekubatsira kambani yavo yevechidiki kukurudzirwa kuTercera Division.
Alba akaita nyanzvi yake yekutanga mumwedzi we 2008 / 2009. Basa rake rakakosha muChitambo yeFIFA World Cup rakazopedzisira rakwezva FC Barcelona iyo yakatanga kukumbira tsitsi uye kukanganwira. Jordi Alba akaregerera chikwata chake chekare ndokubatana navo mu2010. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Bhora ndiro muti wegoridhe, nzvimbo umo Jordi Alba achiri muduku akawana mumvuri uye nyaradzo zvichiita kuti ave munhu mukuru. Zvino, bezera iyi mukuru weSpanish akauya nengoro dzakakungira maziso ake mumoyo make.
Kutanga, Jordi Alba mu 2009 (gore raakapinda muchikwata cheSpain U20) akatanga ukama neaimbova musikana wake Mellisa Morilas. Melissa uyo akapedza makore ekupedzisira e-3 nemutambi wechirwi ari mudzidzi uye vakasangana pane imwe nzvimbo yakakurumbira yaValencia nightclub.
Mukati wekuSpain musikana uyu akachengetedza Jordi pakatarisa uye haana kurega maziso emamwe ngoro. Izvi nokureva zvaireva kuti aifarira godo. Jordi akatiwo ane hutsinye uye akamubata sekunge ari mwana akaonekwa kubva mumufananidzo uri pasi apa.
Mellisa akambotaura kuti anoona Jordi achigona "Kuzvininipisa nekudanana zvikuru nevaGIRLS". Akamboratidzira kumapepanishe eSpain kuti mukomana wake ari "Nguva dzose pavanotarisa uye vakanaka mumubhedha". Kuramba kwaMelisa kuenderera mberi nguva yakaenderera mberi hakuna kukwira zvakanaka naJordi Alba. Izvi zvakaita kuti pave nokuguma kwehukama hwavo hwakagara kwemakore mana.
Muna 2014, gore reFifa yenyika, Jordi akatanga kufambidzana Romarey Ventura. Vakatarisana pamwe vasati vasvika 2014 asi vakambomira kuti vane nyaya.
Romarey anobva kuSevilla. Aimbova mudzidzi weVatoriji muyunivhesiti uye anoshandawo mukuenzanisira. Vaviri vakagovana mapikicha akawanda pamwe chete (zvinoshamisa beach photos) dzimwe nguva shure apo vaipikisa kuti vaidanana.
Mukuwedzera, Romarey Ventura ane ukama hwakanaka nehanzvadzi yaAlba mumutemo (mudzimai waDavid).
Rimwe nguva shure, Jordi naRomererey vaida kuratidzira mufaro wavo kune vateveri. SezvaAugust 2017, Romarey Ventura akanga ane pamuviri nemwana wavo wokutanga. Akatumira chinyorwa pa Instagram neAlba mairi umo ari kugunzva dumbu rake. "Azere nerudo rukuru" iye akanyora.
Vabereki veAlba vanofanira kufara nokuti mukoma wake Davidwo ari kutarisira mwana pamwe chete neshamwari yake Carol panguva imwecheteyo. "Inoratidzika zvose zvakaronga"
Jordi naRomererey vakava nemwanakomana wavo wokutanga Piero musi wa 18th waJanuary 2018.
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Personal Life Facts
Muhurukuro yaJordi Alba naMundo Deportivo, mushure mokudzoka zvakare aifanira kupindura mibvunzo pamusoro pehupenyu hwake. Semuyenzaniso…Alba akareurura kuti anorara maawa 12 pazuva!. Pasi apa ndezvipi zvinyorwa zvinotevera zve Q neA.
Mubvunzo: Ndezvipi zvoupenyu Hwenyu hunowanikwa muHellitalet?
Jordi Alba Anopindura: "Ndikararama ikoko, ndakaenda kumafirimu, mabhizimisi kana mabhagi. Iniwo ndinoenda kuimba yemitambo "Joventut", uko amai vangu vorudo vanoita ".
Mubvunzo: Uri fan fan here?
Jordi Alba Anopindura: "Ndinoda kutamba uye ndinoramba ndichiita nababa vangu. Izvi zvinoita kuti ndifunge uye ndicho chikonzero ndinofunga kuti zvakanaka kuti chess inodzidziswa kuchikoro ".
Mubvunzo: Unonyatsorara maawa 12 here?
Jordi Alba Anopindura: "Ndinogona kurara kwe12 kana maawa 13. Usiku ndinouita kubva ku12am kusvika ku9am uye ndinorara maawa 2,3 kana 4 masikati "
Mubvunzo: Uri muSaradi chakashata here?
Jordi Alba Anopindura: "Saladi inondipenga. Ndinozvidya zvemasikati uye kudya kwemanheru ... Handigoni pamusi wekudya kwekudya kwemafuro asi ini ndinofara nesadhi, imwe huku uye imwe mupunga. Ndinonwa nezve 3 makita emvura pazuva ".
Mubvunzo: Uri Mufudzi Wemimhanzi, zvichida Kevin Roldan?
Jordi Alba Anopindura: "Ndinoda rumba uye" flamenco ". Kevin Roldan? Handizivi kuti ndiani "
Mubvunzo: Unoda Terevhizheni here?
Jordi Alba Anopindura: "Ndinoda sangano reSpain TV" La que se neina ". Ndinogona kutarisa chikamu chakafanana kaviri uye ndinoramba ndichiseka ".
Pakupedzisira, paJordi Alba Personal Life, anonzi ndiye mumiriri weBraun uye anokurudzira zvigadzirwa. Ane mazita emotokari emhando dzakasiyana-siyana kusanganisira Audi.
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Mumwe Mubayiro
Alba akakunda mazita akawanda embavha uye emarudzi akawanda. Pamberi peHTML 2017 / 2018, akabatsira FC Barcelona kuti ibudirire La Liga neCopa del Rey kanhi imwe neimwe. Akawana Supercopa de España kaviri uye FIFA Club World Cup mu2015. Kunyanya zvakadaro neBarcelona, ​​akawana zvose UEFA Champions League uye UEFA Super Cup mu2015. Kunze kwechikwata chake 'kubudirira, akagamuchira zvikwereti zvakasiyana siyana kusvikira zvino. Mimwe mibayiro inokosha zvikuru pakati pavo ndeyotevera:
UEFA Euro Team yeMutambo: 2012
FIFPro World XI: Chechipiri Team , Team Third [2013, 2014 uye 2016]
Jordi Alba Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Chimiro cheMutambo
Alba ane technically ane zvipo uye anokurumidzira kurwisana nechemberi-kumashure uyo anogonawo kushandiswa sevheji rekupedzisira. Nhanho dzake uye simba rake zvinomubvumira kuti ave akabatanidzwa zvikuru mune zvose zvinopesana nekudzivirirwa sezvaanogona kubva kubva kune rumwe rutivi rwechimedu kusvika kune imwe zvakakurumidza.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Jord Alba Childhood Nhau pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Isco Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts